Waa sidee Xaaladda Beledweyne kadib iska hor imaad xalay ka dhacay? (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 4, 2021 7:05 b 0
Iska hor imaad u dhaxeeya Ciidamada Dowladda iyo Maleeshiyaad taabacsan Generaal lagu magacaabo Abuukar Xuud ayaa xalay goor dambe ka dhacay xaafado kamid ah magaalada Beledweyne.
Dagaalka ayaa salka ku haya kadib markii Wasiiro katirsan Maamulka Hirshabeelle ay gaareen magaalada Beledweyne isla markaana ay qorsheeyeen in shir lagu qabto magaalada balse uu ganafka ku dhuftay Jananka.
Hadaba Wararkii ugu dambeeyay Xaalada magaalada Beledweyne iyo khasaaraha ka dhashay iska hor imaadka waxaa inooga warbixiyay Sharmaarke Cabdulaahi daahir oo ah Wariye Madax banaan oo ku sugan beledweyne.
Cabdrisaaq Faamoos ayuu khadka Taleefanka ugu waramay.
Cabashada beeraleyda Burtinle ( dhegayso)